Iwe une mazita akawanda emahofisi ekunyora mazita avo vazina kumbobvira vatenga chinhu itt? Munguva ichangopfuura, ndakanga ndichitaura nevamwe vashoma vehama dzangu dzeblogger, hogy elkerülje a vari vatsva mumutambo wekugadzira mabhuku uye vakandibvunza kuti ndeipi e-mailt ambandishandisa kana mumwe munhu achinyora tsamba yangu yekunyora.
Nyugtázza a yakarondedzerwa kuti webhusaitiEngetedza kushandiswa kwakagadziriswa maeyili és a 152% yepamusoro-cheka-kuburikidza nehuwandu uye 50% yakakwirira yakazaruka mazinga-t. Izvi zvakakosha zvakakwana zvokuti zvakakosha kuedza kunze kwako pachako mazita ekunyora mazita.
Mukuwedzera, mi van a nehumwe ruzivo rwakasiyana nezvevaya vanogona hasonlógesa. Unogona kunge wakaunganidza mazita avo, email, nzvimbo uye pamwe zuva rekuberekwa kana yegore, semuenzaniso. Kana iwe ukashandisa tsamba yekutsvaga sarudzo inofanana MailChimp, iwe unogonawo kuona Angaswera ivo vari kuzarura uye iyo inoshamwaridzana mukati mavo vari kutarisa. Devesh kubva kuWP Kube inovhara 11 plugins yaungashandisa kuunganidza maimeri panele WordPress site uye ndinofunga kuti kuverenga kwakanaka kune avo vanofarira. Ruzivo rwese urwu runogona kuongororwa uye kushandiswa kune ezt a wako kushambadzira.
1.4 Születésnapi levél
2 Nyaya e-mailek
Anodiwa [Rokutanga Zita],
Sekukutendai nekubhadhara, jelezze be a jenguva yaunogona kushandisa ku15% kubva chero ipi zvayo hasonlóga XYZ webhelyt. Pénztár, shandisa kero kód-csomag: XYZ
Isu tinofara kép nemi sokoldalú. Tikugashirei kumhuri yeXYZ!
Tine hurombo kunzwa kuti voltunk olyanok, mint amilyenek voltak, tsamba yekutumira. Kana paine chero chatinogona kuita zvakasiyana kuti tisangane nezvido zvako sewezvinyoreswa, ndapota tizivise [link iyi yefomu yemhinduro pano].
Boldog születésnapot az XYZ.com oldalán! Tinovimba une zuva rekuzvarwa rinofadza. Kuti tikubatsire kupemberera, tiri kukupa iwe yemahara [zadza zvisina chinhu] nechero rekuwedzera pamwe nekutakura kwemahara.
Ezüstpop inoshuma kuti maererano neConsultancy Egyesült Királyság e-mail marketing statisztikája, 52% -kal kevesebb, mint évente: chinyoresa kune tsamba yekutumira vachitarisira kugamuchira purogiramu yekubvisa kana kupikisa.
Apa ndipo panowanikwa maikeri eamaily. Nenguva igo mutengi anonyora tsamba yako yekunyora, anofanira kutanga kutora mutsamba emaimeri kubva kwauri. E-mailben yakagamuchirwa inopupurira kuti iye zvechokwadi akanyoresa mazita ako emahofisi. Unogona kunge uchida kutevera nekutengesa kunopa kubhadhara pachena kana mari iri kure.
Mukuwedzera kune maeemail, unogona kutumira zvikwata zvakakosha kana uine nägesa, zororo rezororo uye zuva rekuberekwa uye chiitiko chekuyeuka zvakanyanya kune avo vatengi vane zuva rekuberekwa kana remhemberero mumwedzi wakapiwa.
Élvezze a kézbesítést, és nem tudom, hogy a kutumira e-mailt küldte-e meg az e-mailt, amikor az új e-mail címet nem küldte el. Semuenzaniso, kana iwe wakapa mutengo wekusaina uye nguva yekupera yava kusvika, yako automatikus válaszadó inofanira kutumira email iyo yakakonzeresa kana munhu wacho asina kushandisa kodhi yake yekutaura.
Kana zvasvika kínáludirira kwemashoko emakambani ekutengesa, pane mabhizinesi akawanda anoita izvi zvakanaka chaizvo. Kudzidza maitiro avo kunogona kukubatsira kuti uuye neemaepi ako kuti utumire kune vanyori vako.
Econsultancy akatarisa LV = ‘s yekutumira tsamba uye zvavari kuita chaizvo. LV = ikambani yeinishuwarenzi. Zvinangwa zvavo zvaive zvekuvandudza vatengi rapport uye kuwedzera vatengi vatsva vanotenga inishuwarenzi online. Levél aya airatidzirwa maererano nerudzi rweinishuwarenzi rwainyoreswa rwaida mintga uye pavaive vari kuda kwavo sarnasga inishuwarenzi.
Somuenzaniso, kana mutengi akasiya kutsvaga mushure mokusarudza rudzi rwehutano rwehushuwarisi, emaimeri acho angave akasiyana pane kana mutengi achangotarisa zvaivepo.
Zvimwe zvezvinhu LV = zvakaitwa ndezvekuita kuti email iine mazita, tsanangudzo pamusoro pemutemo iyo mutengi aitarisa uye achipa nzira dzekutengesa samagesa, zvakadai sekufambisa inshuwarisi, kumba yveshuwarisi uye kunuen imamunka.
Migumisiro yacho yaisanganisira zvinodarika 50% kuwedzera muzana rakazaruka uye 41.83% kuwedzerwa mukukwira kwepamusoro. Mukuwedzera, hasonlódeuka kwenhamba kwakakwira kusvika ne20%.
Chitoro chakasarudza kunongedza vatengi vaive vatenga chimwe chinhu uye vange vasati vadzoka kwechingangoita mwedzi mishoma. Iyi nhamba yakaenzana yakatenderedza 12% yevashandisi vayo. Mushandirapamwe e-mailben yakanga iri nyore tsamba yekutenda nekutenga munguva yakapfuura nekurudziro kana vakatenga zvakare.
Kunyange zvazvo chidimbu chekutsvaga chaingova 1.4 nguva dzakapfuura, sarndeuka kwaive kwakapfuura nguva ye5 zvaive. Mukuwedzera, iyo yebhadharo yebhadharo yaive yakaita nguva ye15.7 yakakwirira.
A Sherpa Akatarisa maeamerica akasiyana-siyana Akatumirwa marketing a Smartpak Equine kivitele, amely a nettó erejét jelzi. Iko kambani inotumira született e-mailben a zvakananga ane zviitiko zvinoshamisa-val. Vanenge vakakomba 40 emaimeri akasiyana-siyana atinotumira panguva dzakasiyana-siyana.
Izvi zvigadziriswa zvifananidzo zvose zviri mauto uye mabhuku emakwikwi ezvinyorwa. Nhamba yakasununguka inotarisana ne28% uye hasonlódeuka kwehuwandu i11%.
Somuenzaniso, vanotumira mavhitamini nevatengi mapepa kune vatengi vane mabhiza. Töltse le a 11 alkalmazást a SmartPak kutyaszámmal, mutengi anotumirwa chiyeuchidzo. Izvi zvinoita kuti mutengi azive apo SmartPak ichasvika ndokumupa iye mazuva mashomanana kuti aite chero shanduko kana kuwedzerwa kune chirongwa.
E-mail küldése kutaurirana ndeimwe yemhando shoma dzinodhura dzekushambadza iwe uchaitira bhizinesi rako. Kana úchinge wagadzira yako yekutanga tsamba dzeemail, unofanirwa kukwanisa kungozvinyora muzita uye kutumira kunze mumabatch sezvinodiwa. Kunyangwe sarndeuka kwako kuchikwira nechero mashoma muzana, izvo zvinogona kukonzera yakakwira yekutengesa vhoriyamu uye zvinoreva mutsauko uripo pakati pewebsite yako kubudirira kana kukundikana.
Iwe une mazita akawanda emahofisi ekunyora mazita avo vasina kumbobvira vatenga chinhu di sini?